What ARE New in Joomla 2.5 | Ahkeno's Blog
What ARE New in Joomla 2.5
March 17, 2012 March 30, 2012 ~ ahkeno
Joomla 2.5 ကို 2012 January မှာစတင် ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။stable အကျဆုံးနဲ့ အသုံးများဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Long term support joomla 1.5 နောက်ပိုင်းက စပြီး versionတွေ တမျိုးပြီး တမျိုးထွက်ခဲ့တဲ့ Joomla ဟာ 2.5 မှာတော့ stable version အဖြစ် 2013အထိထောက်ပံပေးခဲ့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ အကီနိုတို့ joomla 2.5 အကြောင်းလေးကို စတင်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ 1.6 နောက်ပိုင်းထဲက joomla ကို အဆက်ပြတ်သွားပြီးတော့ Drupal ဘက်ရောက်သွားလိုက်တာ ခုမှပဲ joomla ဘက်ပြန်လှည့်နိုင်ခဲ့တော့ joomla 2.5 ဟာ အကီနို အနေနဲ့ ကြည့်ရင်ပိုပြီး ပြည့်စုံကောင်းမွန်လာတယ် ၊ user friendly လည်း ပိုဖြစ်လာတယ်။ အဓီကကတော့ joomla ဆိုရင် security မကောင်းဘူး access level ကောင်းကောင်း မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး လို့ပြောတဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို တွေ မပြောနိုင်လောက်အောင် Joomla 2.5 မှာထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
updating status လက်ရှိသုံးနေတဲ့ core joomla နဲ့ extensions တွေ update ဖြစ်မဖြစ် စစ်ပေးပြီး notification ပေးတဲ့ feautre ပါဝင်လာခြင်း
Nestest Catgory Nestest Catgory ကတော့ 1.6 နောက်ပိုင်းကစပြီးပါလာခဲ့တာပါ။
Customize offline mode
Site offline ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြစာသား ဓာတ်ပုံနဲ့ ပြုပြင်လာနိုင်ခြင်း ။
Powerful User Access Level Joomla 1.6 ထဲက ပါလာတဲ့ feautre အသစ်ဖြစ်ပေမဲ့ Complex website/projects တွေအတွက်အရမ်းအသုံးဝင်သော toolsလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ထပ်လောင်းပြောကြား ချင်လို့ပါ။
Beez Template Joomla 1.5 ထဲက ပါဝင်ပြီး အသုံးဝင်လှတဲ့ Beez template ဟာ 2.5 မှာတော့ mobile အတွက်ပါ ပိုမိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ကိုယ့်ရဲ့ website ကို mobile broweser မှာ fix ဖြစ်အောင် module တွေ plugin တွေထပ်ပြိး ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Save,Save & Close,Save & New 1.6ကစပြီးပါလာတဲ့ feature တခုပါပဲ။
1.6 တုန်းကတော့ သတိမထားမီပေမဲ့ ခု 2.5 မှာ အကီနိုတွေ့ ရှိထားတာကတော့ Editor ပါပဲ။ သူကတော့ user access level မှာပါ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ author/developer/designer တွေကို သူတို့ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ editor တွေကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေအသုံးတဲ့ tool လေးပါ။
1.5 ကိုသုံးဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ section မပါဝင်လာတော့တာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒီလိုပဲ Templates ပိုင်းမှာလည်း admin အတွက်ပါ သီးသန့် ပြောင်းလာနိုင်တဲံ admin template လေးပါဝင်လာပါတယ်။
နောက် Maintenance မှာ Global check in အပြင် clear cache နဲ့ purge experire cache အသစ်ထပ်တိုးပါဝင်လာတာဟာ site builder/ developer အတွက်အလွန်ပဲ အသုံးဝင်လှပါတယ်။
အကီနို ဒီပုစ်ကိုရေးနေတုန်းမှာပဲ joomla ဟာ google summer of code 2012 မှာ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ joomla အခြေပြုထားတဲ့ Joomla CMS /Joomla Platform နဲ့ ရေးထားတဲ့ project ကို ပါဝင်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ။http://www.google-melange.com/gsoc/org/google/gsoc2012/joomla နှစ်ရက်အတွင်းဖတ်ထားသမျှကို ပြန်လည်မျှဝေထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထပ်ပြီးတွေ့ ရှိတာလေးတွေကိုလည်း ထပ်မံရေးသားသွားအုံးမှာပါ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ပိတ်ရက်ကလေးဖြစ်ပါစေ။
Posted in CMS, Tech News	CMSJoomlajoomla 2.5Opensourcetech
< Previous Life is Encounters
Next > What Leads to Success?
2 thoughts on “What ARE New in Joomla 2.5”
gnumax (@gnumax) says:
In English please?? 🙂 :))
hehe! Will do it 🙂 This post is mention to Myanmar audience 🙂 Thank for retweeted and Comment